BL – Categories – Channel Myanmar
The Yearbook (2021) The Yearbook (2021)Yearbook လို့ ခေါ်တဲ့ "တစ်နှစ်တာမှတ်စု" စာအုပ်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေကို မှတ်မိကြပါရဲ့လား?????ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ ဒီစာအုပ်လေးကို အခြေခံထားတဲ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလများဆီကို ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။"ရေးပေးပါ" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို မှတ်မိကြပါသလား?ဒီကားကြည့်ရင်း အဲဒီစာအုပ်ပိုင်ဆိုင်ဖူးတဲ့လူတွေဆိုရင် တသသနဲ့ ဖြစ်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ ဖော့ဘ် နဲ့ နတ် ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို အတူတူ ဖော်ဆောင်ကြရင်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြတဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ သံယောဇဉ်ကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ကံဆိုးတာကတော့ တစ်ယောက်သောသူက ကတိမတည်ခဲ့ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် သူတို့ကြားမှာ နာကျင်မှုသာ ကြွင်းကျန်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာ သူတို့တွေ ကွဲကွာခဲ့ကြပြီး ၄ နှစ် အကြာမှာတော့ ..... အမှန်တရားတချို့နဲ့အတူ တစ်နှစ်တာမှတ်စု စာအုပ်ကနေ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးသတ်မှာ သူတို့ရဲ့ခင်မင်မှု တွေ ပြန်ရလာမလား? အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည် ပေါ်လာကြမှာလား ဆိုတာကိုတော့တစ်နှစ်တာမှတ်စု စာအုပ်ရဲ့ အမှတ်တရတွေနဲ့ အတူတူ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အညွှန်းကို August ...
I Promised You the Moon (2021) I Promised You the Moon (2021)I told Sunse About You (ITSAY) ရဲ့ Part2ဖြစ်တဲ့I Promised You the Moon ကတော့ ထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ BL ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ တော်တော်လေး ထူးခြားတဲ့ ဇာတ်လမ်းမို့ IMDb - 9.1/10 ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Cimetography နဲ့ Music က အစ အသေးစိတ် ဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်ကား ဖြစ်တာမို့ BL ဇာတ်လမ်းတွဲ ကြိုက်နှစ်သက်သူများ အထူးနှစ်ခြိုက်ကြမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ .......တက် နဲ့ အိုအျူ တို့ နှစ်ယောက်သား ဖူးခက်ကနေ ဘန်ကောက်မှာ ကျောင်းလာတက်ကြတဲ့ အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပထမတွဲမှာ နည်းပါးခဲ့တဲ့ Love Line ...
I told Sunset about You (2020) I told Sunset about You (2020) Season 1 Completeငါ မင်းအကြောင်း ဆည်းဆာကို ပြောပြခဲ့တယ်။----------------------------------------------------------------------------အချစ်ဆိုတာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါက်ဖွားလာတတ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းထဲက အချစ်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက တရုတ်နွယ်ဖွားအထက်တန်းကျောင်းသားလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းပါဘာကိုမှ ခေါင်းစဉ်မတပ်ဘဲ လူနှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလို့ကြည့်ရင်တော့ အချစ်ကို ခံစားမိကြမှာပါ။ဒီတော့ ခေါင်းစဉ်တွေကို ခွာပြီးလူနှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ။BL ဇာတ်လမ်းကြည့်တတ်သူတွေ မဟုတ်ရင်တောင်ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြည့်မိပြီး သဘောကျစေရမယ်ဆိုတာ အာမခံပါတယ်ဗျာ။ဖူးခက်ကမ်းခြေမှာ အခြေတည်ပြီး ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖူးခက်ကမ်းခြေရဲ့အလှတရားတွေကိုလည်း တစ်ဝကြီး ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး BL ဇာတ်လမ်းတွဲလို့ ပြောလို့ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကိုChannel Myanmar ကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။IMDb - 9.4/10 ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိတ်သတ်များ လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း။Translated by : AugustEncoded by : ...
TMDb: 9.4/10/10 326 votes
(Still) 2gether: The Series (2020) [Unicode]ပထမပိုင်းမှာတုန်းက တိုင်းနဲ့ဆာရာဝပ်တို့ happy ending ပေါ့ အခု still togetherမှာတော့ တကယ့်ချစ်သူဘဝကအခုမှစမှာပါ သူတို့၂ယောက်တူတူနေလာတာ၁နှစ်ကြာတော့ပြဿနာအသေးအဖွဲ့လေးတွေ ပေါ်လာပါတော့တယ် ဒီ still togetherမှာ ပိုပြီးroမှာပါ ပိုပြီးလည်းချစ်ပြကြမှာပါ ဘာသာပြန်ရင်းနဲ့အူတွေတောင်ယားပါတယ်နော် Still Togetherမှာကော သူတို့အတွဲတွေပြတ်သွားမလား ပိုပြီးပဲချစ်သွားကြမလား ဆိုတာကြည့်ကြပါဦးလို့...။( အညွှန်းရေးသားထားသူကတော့ Dolly ပါ ) [Zawgyi]ပထမပိုင္းမွာတုန္းက တိုင္းနဲ႔ဆာရာဝပ္တို႔ happy ending ​ေပါ့ အခု still togetherမွာ​​ေတာ့ တကယ့္ခ်စ္သူဘဝကအခုမွစမွာပါ သူတို႔၂​ေယာက္တူတူ​ေနလာတာ၁ႏွစ္ၾကာ​ေတာ့ျပႆနာအ​ေသးအဖြဲ႔ေလးေတြ ေပၚလာပါေတာ့တယ္ ဒီ still togetherမွာ ပိုၿပီးroမွာပါ ပိုၿပီးလည္းခ်စ္ျပၾကမွာပါ ဘာသာျပန္ရင္းနဲ႔အူ​ေတြ​ေတာင္ယားပါတယ္​ေနာ္ Still Togetherမွာ​ေကာ သူတို႔အတြဲ​ေတြျပတ္သြားမလား ပိုၿပီးပဲခ်စ္သြားၾကမလား ဆိုတာၾကည့္ၾကပါဦးလို႔...။( အညႊန္္းေရးသားထားသူကေတာ့ Dolly ပါ ) Native Title: เพราะเรา(ยัง)คู่กัน Episodes:5Aired: Aug 14, 2020 - Sep 11, 2020 Aired On: Friday ...
2gether: The Series (2020) [Unicode]Bromance ကိုမှ ရိုဆန်ဆန် သဘာဝဆန်ဆန် နဲ့ တအားမပိုတအားမလိုဘဲ မင်းသားချောချောလေးတွေကိုသဘောကျရင် ဒီ 2gether Series လေးကိုကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုက်ပါရစေတိုင်း ဆိုတဲ့ဆော်ကြည်ဘဲလေးက တွဲသမျှကောင်မလေးတိုင်းနဲ့သူနဲ့အဆင်မပြေရှာပါဘူး ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖူးစာဖက်အမှန်မတွေ့သေးဘူးပေါ့အဲ့တာနဲ့သူ့ဖူးစာဖက်ကိုတက္ကသိုလ်မှာတွေ့ရမယ်လို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျောင်းစစတက်ချင်းနေ့မှာပဲသူ့ခမျာကောင်မလေးလန်းလန်းတွေကသူ့ကိုစိတ်တောင်မဝင်စားဘဲ ဂရင်းဆိုတဲ့ ကောင်လေးကသူ့ကိုကြွေသွားပါလေရော...သူကတော့သဘောမကျကြောင်းငြင်းလေ ဟိုကပိုဆိုးလာလေဆိုတော့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အကြံပေးချက်အရ ရည်းစားကောင်လေးအတုထားဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့မှာသူ့ရည်းစားကောင်လေးဟန်ဆောင်ဖို့ ဆာရာဝပ်ဆိုတဲ့တကယ့်အဲ့ကျောင်းရဲ့ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်ကြီးကိုအကူအညီသွားတောင်းပါလေရော...အခြေတလိုင်းဆာရာဝပ်နဲ့ ပိန်းဥကတောင်အဖေပြန်ခေါ်ရလောက်တဲ့ ငပိန်းလေး တိုင်း တို့ဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်ကြမလဲဆိုတာ မိုးအေးအေးလေးနဲ့ Chillနိုင်ကြပါစေလို့...( အညွှန်းရေးသားထားသူကတော့ Dolly ဖြစ်ပါတယ် )[Zawgyi]Bromance ကိုမွ ႐ိုဆန္ဆန္ သဘာဝဆန္ဆန္ နဲ႔ တအားမပိုတအားမလိုဘဲ မင္းသားေခ်ာေခ်ာေလးေတြကိုသေဘာက်ရင္ ဒီ 2gether Series ေလးကိုၾကည့္ဖို႔အႀကံေပးလိုက္ပါရေစတိုင္း ဆိုတဲ့ေဆာ္ၾကည္ဘဲေလးက တြဲသမွ်ေကာင္မေလးတိုင္းနဲ႔သူနဲ႔အဆင္မေျပရွာပါဘူး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ဖူးစာဖက္အမွန္မေတြ႕ေသးဘူးေပါ့အဲ့တာနဲ႔သူ႔ဖူးစာဖက္ကိုတကၠသိုလ္မွာေတြ႕ရမယ္လို႔သူဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္ေက်ာင္းစစတက္ခ်င္းေန႔မွာပဲသူ႔ခမ်ာေကာင္မေလးလန္းလန္းေတြကသူ႔ကိုစိတ္ေတာင္မဝင္စားဘဲ ဂရင္းဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးကသူ႔ကိုေႂကြသြားပါေလေရာ...သူကေတာ့သေဘာမက်ေၾကာင္းျငင္းေလ ဟိုကပိုဆိုးလာေလဆိုေတာ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ အႀကံေပးခ်က္အရ ရည္းစားေကာင္ေလးအတုထားဖို႔စဥ္းစားလိုက္တယ္အဲ့မွာသူ႔ရည္းစားေကာင္ေလးဟန္ေဆာင္ဖို႔ ဆာရာဝပ္ဆိုတဲ့တကယ့္အဲ့ေက်ာင္းရဲ႕ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ႏွင္းဆီခိုင္ႀကီးကိုအကူအညီသြားေတာင္းပါေလေရာ...အေျခတလိုင္းဆာရာဝပ္နဲ႔ ပိန္းဥကေတာင္အေဖျပန္ေခၚရေလာက္တဲ့ ငပိန္းေလး တိုင္း တို႔ဘယ္လိုေတြျဖစ္ပ်က္ၾကမလဲဆိုတာ မိုးေအးေအးေလးနဲ႔ Chillႏိုင္ၾကပါေစလို႔...( အညႊန္္းေရးသားထားသူကေတာ့ Dolly ျဖစ္ပါတယ္ ) Native ...
TMDb: 8.7/10 10 votes